वीर अस्पतालकाे स्तराेन्नति, विशिष्ट श्रेणीसहित ८३१ दरबन्दी थपिने
भाद्र १४, २०७७ २२:२६ मा प्रकाशित
काठमाडौं । देशको जेठो अस्पताल वीर अस्पताललाई विशिष्ठ उपचार केन्द्रका रुपमा विकास गरिने भएको छ । यसका लागि अस्पतालमा प्रमुख विशेषज्ञ (बाह्रौं) तह राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) प्रशासन प्रमुखसहित ८३१ जना थप गरि १५१८ जना जनशक्ति पुर्याउने तयारी गरिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अस्पताललाई विशिष्ट उपचार केन्द्रको रुपमा विकास गरि सबै प्रकारको विशेषज्ञ सेवा सञ्चालन गर्न प्रमुख विशेषज्ञ सहित डाक्टर, नर्सको दरबन्दी थप गर्ने तयारी गरेको मन्त्रालय उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
हाल ४५० बेड क्षमता रहेको अस्पताललाई १००० बेडको बनाइने भएको छ । अहिले अस्पतालमा ६८७ दरबन्दी रहेकोमा यसलाई थपेर १ हजार ५१८ पुर्याइनेछ । जसमा ८५० नर्ससहित ६६८डाक्टर, पारामेडिक्स संख्या पुर्याइनेछ । यो दरबन्दी लोकसेवा मार्फत असोजसम्ममा पुरा गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेकोे छ । मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार वीर अस्पतालको निर्देशकमा प्रमुख विशेषज्ञ (बाह्रौं) तह राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) सहित ८३१ जनाको दरबन्दी थप गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । दरबन्दी स्वीकृतीको लागि फाइल संभवत भोलि अर्थ मन्त्रालय पठाइन्छ र यो चाँडै कार्यान्वयनमा आउनेछ स्रोतले भन्यो ।
वि.सं. १९४७ साल साउन १२ गते १५ बेडबाट अस्पताल शुरु भएको थियो । वि.सं. १९९० सालमा नेपालकै पहिलो स्वास्थ्य शिक्षा दिने विद्यालयको शुरुवात पनि यही अस्पतालबाट भएको थियो । २०५१ सालमा पीजीएमइसीसी मार्फत एमडी एमएसको अध्ययन पनि यही अस्पतालबाट शुरु भयो ।
अहिले सो अस्पतालमा एमडी, एम,डीएम, एमसीएचको अध्यापन भइरहेको छ तर व्यवस्थित हुन सकेको छैन । अस्पतालको स्टाफ क्वाटर तथा नर्सिङ क्याम्पस भएको १७ रोपनी जग्गामा अत्याधुनिक सात तले भवन निर्माणाधीन छ । यो भवनको निर्माण कार्य ३ महिनाभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।